Akụkọ - Gịnị kpatara chaja ikuku iPhone na-adịte aka ma ọ bụ enweghị ike ịgba ụgwọ?
Ọtụtụ ndị ahịa ajụọla anyị gbasara oge ma ọ bụ ọdịda ịchaji iPhone n'oge chaja ikuku. Nke a ọ bụ nsogbu na iPhone ma ọ bụ chaja? Anyị nwere ike dozie nsogbu nke oge ma ọ bụ enweghị ike ịcha chaja ikuku iPhone?
1. Kwenye ma ọ bụrụ na ọ dị na mpaghara chaja ikuku
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ chaja ikuku na-enwe naanị atụmatụ eriri igwe ole na ole. Debe iPhone n'ọnọdụ a họpụtara ka ị nwee ike ịgba ụgwọ. Ọ nwere ike ịdị mkpa iji kwado ma edobere ya nke ọma, ọ bụrụ na ọ na-eme obere oge, enwere ike ọ gaghị edobe ya nke ọma, ịnwere ike ịgbalị ịgbanwe akụkụ ma ọ bụ chọta ebe kacha mma chajịja maka chaja ikuku.
Na mgbakwunye, mgbe ụfọdụ mgbe enwere ọkwa ma ọ bụ oku na-abata, ịgbanye mkpọtụ ga-eme ka iPhone kwagharịa ma mee ka chaja kwụsị chaja. A na-atụ aro ka ị gbanyụọ vibration mgbe ị na-akwụ ụgwọ.
3. Kwado ma ọkụ chaja ikuku agbanyere
N'oge chaja ikuku, ị nwere ike ịhụ ihe ngosi chaja na chaja ikuku. Ọ bụrụ na ọ gbaghị ọkụ, biko gosi ma agbanyere eriri ike.
5. Gbanwee na chaja ikuku ọzọ
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu dị na chaja ikuku. Ọ bụrụ na ị nwere chaja ikuku ọzọ n'aka, ịnwere ike ịnwale nke ọzọ. Ọ bụrụ na enwere ike ịchaji ya, mgbe ahụ chaja ikuku nwere nsogbu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịzụta n'aka anyị. Enwere m ike ekwe nkwa na chaja ikuku LANTAISI nwere ike dochie chaja ikuku gị wee bụrụ otu chaja ọkacha mmasị gị n'ọdịnihu.
2. Kwenye na a na-akwado chaja ikuku Qi
Mgbe ị na-ahọrọ chaja ikuku, a na-atụ aro ka ịhọrọ chaja ikuku nwere asambodo Qi. Na mgbakwunye, ka asambodo na-abawanye, ka ikike chaja ikuku nke ụlọ ọrụ na-abawanye na ọ dị nchebe karị.
4. Kaadị ike enweghị ike ịgba ụgwọ karịa na 80%
Ọ bụrụ na achọpụtara na iPhone enweghị ike na-aga n'ihu na-ana mgbe ọ na-n'ụzọ zuru ezu chaja na 80%, ọ bụ n'ihi na iPhone batrị ekpo oke ọkụ na nchekwa usoro na-arụ ọrụ, nke ga-amachi nchaji mgbe ike ruru 80%. N'oge a, ịkwesịrị itinye iPhone n'ebe dị mma, ma kwụọ ya ọzọ mgbe okpomọkụ dara, mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu na-ana ya.
Mgbe na-agbalị niile n'elu 5 ụzọ, batrị ka na-apụghị ebubo, ya bụ, e nwere nsogbu na ngwaike, ochie version nke iOS nwere ike ghara mma akwado iPhone wireless Nchaji, anyị nwere ike na-agbalị imelite iPhone ka ọhụrụ iOS. Enwere ike izipu ụdị ma ọ bụ ekwentị naanị n'isi ụlọ ọrụ maka ịrụzi ya. Ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị.
Oge nzipu: Nov-04-2021